विवाहपञ्चमी महोत्सव : श्रीरामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना गरी मनाइँदै ! [आज सार्वजनिक विदा]
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » विवाहपञ्चमी महोत्सव : श्रीरामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना गरी मनाइँदै ! [आज सार्वजनिक विदा]
बुधबार २६ मङ्सिर, २०७५
काठमाडौं । मर्यादापुरुष श्रीरामचन्द्र र आदर्श नारी सीताको पूजा आराधना गरी आज विवाहपञ्चमी पर्व मनाइँदै छ । श्रीराम र सीताबीच त्रेता युगमा भएको विवाहको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष मंसिर शुक्ल पञ्चमीका दिन विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाउने गरिन्छ । मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकपुरधाममा भगवान् सीता र रामको विवाह महोत्सव आज विधिपूर्वक गरिँदै छ । महोत्सव मनाउने क्रममा मिथिलाको संस्कृतिअनुसार मटकोर, तिलकोत्सव, स्वयंवर र विवाह संस्कार सम्पन्न हुन्छ ।
पौराणिक मान्यताअनुरूप राम मन्दिरबाट बाजागाजा, झाँकीसहित भगवान् रामको प्रतिमालाई विशेष रूपमा निर्मित डोला सिंहासनमा राखी रंगभूमिमा पु¥याइन्छ । त्यस्तै जानकी मन्दिरबाट सीतालाई विशेष सुसज्जित डोलामा राखी रंगभूमिमा लगिन्छ । रंगभूमिमा स्वयंवर विधि, परीक्षणको वैवाहिक विधि सम्पन्न भएपछि सीता–रामलाई जानकी मन्दिरमा ल्याइन्छ । त्यसपछि मिथिला संस्कृतिअनुसार विवाह सम्पन्न हुन्छ ।
देवताको मानवीयकरणको भावनासँग सम्बद्ध विवाह महोत्सवमा सरिक भएपछि मनोवाञ्छित फल र मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास छ । यसैगरी देशभरका राम सीता मन्दिरमा पनि विशेष पूजा आराधना र महोत्सव गरी मनाइँदैछ । विवाहपञ्चमी महोत्सवमा भारतको अयोध्याबाट दुई दिन अघि नै भारतको अयोध्याबाट जन्ती आइसेकेका छन् । तर यसपटक भने जन्तीमा उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि सहभागी हुँदैछन् ।
उनी आज बिहान ११ बजे भारतको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री योगि आदित्यनाथ बुलेट प्रुफ बिमानबाट जनकपुरको एयरपोर्टमा उत्रिने छन् । मुख्यमन्त्री योगीको स्वागतका लागि प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र भौतिक पुर्वाधार तथा बिकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल लगायत प्रदेश २ का सत्तारुढ दल राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव लगायत जनकपुर बिमानस्थलमामा जाने कार्यक्रम रहेको छ । उनको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा स्वागत गरिने छ ।
प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा अनुसार भगवान् रामको नगर भारतको अयोध्याबाट जन्ती पहिलो पटक जनकपुर आएका उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीलाई संघीय सरकारको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतको अगुवाइमा बिमानस्थलबाट स्वागत गर्दै जानकी मन्दिरमा दर्शन, पुजा अर्चना गरि मधेश भवनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ । आज विवाह गर्न साइत नचाहिने मान्यतासमेत छ । यस अवसरमा आज प्रदेश नं। २ सरकारले प्रदेशका आठ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।